Xiriirka Ilaah ee dadkiisa, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
<p> <img src = "https://wkgch.matomo.cloud/matomo.php?idsite=1&amp ;rec=1" style = "xadka: 0;" alt = "" /> </p>
Macluumaadka sharciga ah
Ilaaha Aabbaha ah
Ilaah - hordhac
Aqoonsiga runta ah ee Ilaah
Aqoonsiga Reality ee Ilaah II
Barnaamijka dib u furista
Mucjisada dhalashada Ciise
Waa kuma ninkaasi?
Wuxuu u dhashay inuu dhinto
Muxuu Ciise u dhimanayaa?
Ciise Axdiga Hore
Ciise dhalashadiisa kahor
Ciise keligiis ma ahayn
Aqoonta Ciise Masiix
Ruuxa Quduuska ah
Ku kalsoonow Ruuxa Quduuska ah
Ruuxa Quduuska ah qof
Yaa Ilaah ah?
Su'aalaha ku saabsan Saddexmidnimada
Seddex ka mid ah midnimada
Saddexanka ee Kitaabka Quduuska ah?
Ilaah: Saddex ilaah?
Muhiimadda Kitaabka Qudduuska ah
Yuu yahay Ciise Masiix?
Waa maxay dembiga?
Waa maxay baabtiiska?
Waa maxay kaniisadda?
Yaa ama maxay Shaydaanku?
Waa maxay Axdiga Cusub?
Waa maxay cibaadadu?
Saxaafadda Focus Jesus
Hayso nolosha weligeed ah
Ciise: kibista nolosha
Ciise wuu kacay, wuu nool yahay
Nimcadu miyuu dulqaataa dembiga?
Isbarbar dhig xaakinka garsooraha
Iska yaree ubaxyada u engegay
Kala sooca sarreenka
Masiixu wuu sara kacay
Anigu waxaan ahay naagtii Bilaatos
Rajada ayaa dhimaneysa
Laga soo bilaabo dilaaca ilaa basbaaska
Sawirka Ciise oo dhan
Baasaboorka loogu talagalay Boqortooyada Ilaah
Ruux run ah
Nolosha la soo furtay
Axdi dambi dhaaf
Iftiinka ayaa ifaya
Iftiinka Masiixa ee dunida
Hadiyadda Eebbe siiyay aadanaha
Sheekada ugu weyn ee dhalashada
Noqo kuwa kale ee barakada leh
Eebbe oo aan xadidnayn
Culayska culus ee dembiga
Cashada ugu dambeysa ee Ciise
Warar been abuur ah?
Doorashada ugu fiican
Cibaadada runta ah
Xukunkii ugu dambeeyey
Khibrad xorriyadda dhabta ah
Si aad u fuliso sharciga
Cilaaqaadka kulaylka ah
La joogitaanka Ilaah
Kaniisada runta ah
Ciise wuxuu kaa yaqaanaa dhabta
Isha biyaha biyaha nool
Raadi macallinka ugu fiican
Sare u kaca hantida
Isagoo la wadaagaya Ciise
Laasaros waa soo baxayaa!
Waa kuma Baraabbas?
Rumaysadka - arag sawirka aan la arki karin
Ciise waa nool yahay!
Cabsida maxkamada ugu dambeysa?
Meesha saxda ah waqtiga saxda ah
Ciise, axdiga ballanqaadka ah
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ku noolyahay!
Safarkaaga soo socda
Ilaah waa nala joogaa
Waqtigaa sax ahaa
Fikradaha ereyga Ilaah
Dhulka moolka buluugga ah
Ciise: Boqortooyada Ilaah
Masiixa waa ku jiraa!
Masiixu ha iftiimiyo
Dhammaadka sheekada nolosha
Hope for indhoole ah
Maxaad u malaynaysaa dadka aan rumaysadka lahayn?
Taasi waa waxa aan ka jeclahay Ciise
Wuxuu i jecel yahay
Anigu waxaan ahay qof la qabatimo
Badbaadadu waa arrinka Ilaah
Pond ama river
Ciise - xigmadda qofka
Hel nabadda Ciise
Diirada saar Ciise
Xaqiiqdii waa la dhammaystiray
Warka wanaagsan ee qof walba
Cashar ka soo jimicsiga
Marka hore waa inay ahaato ugu dambeyntii
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu suurtagal ka dhigayaa suurtagal
Nabadgelyada Maalinta Hooyada
Si aad ula kulantid dareenka oo dhan
Wuxuu ku guuleystey
Qiimaha Boqortooyada Ilaah
Ku noolaanshaha jacaylka Ilaah
Cibaadada ama cibaadada
Afar aasaas oo ku saabsan Ilaah
Mabaadiida asaasiga ah
Ilaah wuxuu bixiyaa nolosha runta ah
Dallacaadda Boqortooyada Ilaah
Raadi nabad gudaha ah
Xiriirinta sida ku xusan tusaale ahaan Masiixa
Waa kuwee hadiyado wanaagsan?
Ciise - allabariga ka wanaagsan
Ilaahay ha noqto siduu ahaa
Miyaad adeecsan tahay?
Waxaa run ahaantii la sameeyaa
Kaalay, Rabbi Ciise
Waxba nama fogeeyo jacaylka Ilaah
Is-deji - Gordon Green
Xusuusin waqtiga saxda ah
Matthew 9: Ujeedada Bogsiinta
Xiriirka Ilaah ee dadkiisa
Amarradaada Rabbiga ku aamin,
Maxaad u tukatey?
Iyada oo dulqaado inay shaqeyso
Waxa uu daryeelay iyada
Go'aanso in la dhoolo
Matthew 7: Mawduuca On Mount
Dhaqso oo sug
Dabin dabbaaldeg ah
Matthew 6: Mawduuca On Mount
Wada noolaanshaha ilaahay
Minesaska King Solomon ee 22
Iyada oo kalsooni ka hor carshiga
Matthew 5: Mawduuca On Mount
Sabuurrada - xidhiidhka Ilaah
Mines of King Solomon (qaybta 21)
Dhibaatada xun ee dunidan
Bilow maalintii Ilaah
Mawduuca Buurta (qaybta 1)
Miyaynu wacnaa nimcada jaban?
Mines of King Solomon (qaybta 20)
Jacaylka Ilaah waa mid cajiib ah
Ilaah fursad labaad ma siiyaa?
Dhibaatooyinka , ,
Dhinaca kale ee kharashka
Go'aanka - si loo eego Ilaah
Wax aad u wanaagsan oo run ah?
Mines of King Solomon (qaybta 19)
Iyada oo Ciise ku faraxsan iyo murugo
Looma soo noqonaynin caadi ahaan
Qorraxdu waa Ciise Masiix
Aqoonsiga cusub ee Masiixa
Mines of King Solomon (qaybta 18)
Soo hel mooska
Mines of King Salomos (qaybta 17)
Ciise, jidka keliya?
Maxay tahay mid aad u khusaysa Ciise?
La wadaag iimaanka
Qof kale ayaa sameeya
Ilaah waa dareen
Soo saar awoodda Ilaah ee salaadda
Boqortooyada Ilaah (qayb ka mid ah 6)
Mines of King Solomon (qaybta 16)
Sharciga iyo nimcada
Aayado waslad dahab ah
Wuxuu ina siiyaa buuxa
Boqortooyada Ilaah (qayb ka mid ah 5)
Nimco xanuun iyo dhimasho
Boqortooyada Ilaah (qayb ka mid ah 4)
Mines of King Solomon (qaybta 15)
Maxaa Dr. Faustus ma uusan ogeyn
Aqoonsigeenna dhabta ah
Ma ahan 100% Venda
Haddii aan ahay Ilaah
Boqortooyada Ilaah (qayb ka mid ah 3)
Mines of King Solomon (qaybta 14)
Sabuurka 9 iyo 10
Goormuu Ciise ku dhashay?
Boqortooyada Ilaah (qayb ka mid ah 2)
Mines of King Solomon (qaybta 13)
1914-1918: "Dagaalkii Dilay Ilaah"
Jacayl xag jir ah
Waxaan ku arkay Ciise adiga
Waqtiga ku habboon meesha saxda ah
Boqortooyada Ilaah (qayb ka mid ah 1)
Eyga runta ah
Sabuurrada 8: Eebaha Umadda Umadda
Shaqo murugo leh
Mucjiso ee dhalashada
Erayadu waxay leeyihiin awood
Saboolnimada iyo deeqsi
Maxaa loola jeedaa in lagu dhex jiro Masiixa?
Sidee ula kulmi doonaa kuwa aan rumaysadka lahayn?
Ka fikir badbaadintaada
Waxaad dareentaa dambi
Xidhiidh lala yeesho Ilaah
Masiixu halkan ayuu joogaa!
Maxay Ilaahay uga dhigeysaa Masiixiyiintu in ay xanuunsadaan?
Tanu waa muujinta Ilaah ee jacaylka
Waxaa aqbalay Ciise
Ku kalsoonow Ilaah
Qaadir leh qodxan
Aad u fiican inaad noqoto run
Ha ku xadgudbin nimcada
Ilaah marnaba ma joojiyo jacaylka
Badbaadada dunida oo dhan
Ilaah wuxuu muujinayaa nimcada
Dhaxal aan la qiyaasi Karin
Lagu abuuray naxariis
Karl Barth: PROPHET kaniisadda
Warqadda Roomaanka ayaa sababtay rabshado
Lix shaqeynaya kaniisadda
Kaniisadda Muujintii 12
Shaydaanku maaha ilaah
Dhamaadka waa bilowga cusub
Matthew 24 oo ku saabsan dhamaadka
Waa maxay badbaadada?
Ma waxaan ku nool nahay maalmaha soo socda?
Waxsii sheegista kitaabiga ah
Laasaros iyo nin hodan ah
Kaliya habka kaliya?
Dhibaatooyinka jahannamada weligood
Cirka ma sareeyaa ama ma aha?
Boqortooyada Ilaah way dhowdahay
Soo laabashadii Ciise
Aaminaada indha la '
Indhahaygu waxay arkeen badbaadintaada
Dhammaan hubka Ilaah
Cibaadada caqliga leh
Waa maxay kiristaanka wanaagsan
Badbaadinta dhammaan dadka
Ku dadaal in Ilaah
Ciise: khuraafaad kaliya
Biyaha u beddelaya khamri
Waa maxay xorriyadda?
Nolosha ilmaha ee Ciise
Laaluush, fadeexad sharaf leh
Sababta loo qabo rajo
Beeraha iyo lamadegaanka
Masiixa ah lambarka Kormaridda
Wuxuu ku qoran yahay gacantiisa
Gaajadu waa qoto dheer oo innaga gudubtay
Dib u soo noqo oo weligiisna sii jir
Maxaad u tukatid
Nabadgelyada dadka ajnebiga ah
Duco u noqo kuwa kale
Waxba ma jiro
Iga ilaali kuwa raacsan
Indhahaaga oo kaliya
Dhexdhexaadiye waa fariin
Baahida ugu weyn
Shisheeyaha maxalliga ah
Qiyaas ahaan gabagabeyn
Sidee baan u tukado si waxtar leh?
Wuxuu nabadda keenay
Just yimaadaan sida aad tahay!
Ilaahna wax idiinma qabsan karo
Ka hadlidda Nolosha
Waa kuma Nikodemos?
Ciise wuxuu ku yidhi, "Anigu waxaan ahay run
Gaariga waa farriinta
Calaamaduhu waxay noqdaan kuwo muuqda
Masiix, dhammaadka sharciga
Warqad isbeddel ah
Sii ugu xun ee sayidkiisa
Caano miro fiican
Dembi iyo ma quusto?
Waxaa jira Ciqaab weligeed ah
Ma helaysid wax bilaash ah!
Caalamka oo dhan
Ilaah sidoo kale wuxuu jecelyahay cibaadada
Dib-u-heshiisiin - waa maxay?
Waxaan u dabaaldagaa Ascension
Advent iyo Christmas
Samee fursadda ugu badan
Sheekooyinka iyo siraha
Injiilku waa war wanaagsan
Laasarosow, soo baxa!
Dhaqso oo sug!
Ilaah waa dhererka
Ilaah weli ma jecel yahay?
Waxaan nahay shaqada Ilaah
Sidee loo bartaa damiirka?
Naftaydoy, Rabbiga ammaan
Miyaan iska tagi doonaa?
Ku raaxee safarka
Noqo dheeman ruuxi ah
Ka fiican quraanjada
Maxaad Ilaahay ugu jawaabtaa salaada?
Ilaah baa doortay
Qareenka qarsoodiga ah
Ficil iyo daacadnimo
Ilaah wuxuu ku jiraa sanduuq
Allabaryo ruuxi ah
Ma aaminsan tahay?
Ilaahay maalin walba u maamuus
Ayaa go'aamiya ficilladeena
Xagee ayuu Ciise ku noolyahay?
Hope qof kasta
Fiqi ahaanta Masiixa
Kaniisad, mar kale dhashay
Miyaan baraynaa Dib-u-heshiisiinta?
Dib u eegida WKG
Qorniinka Quduuska ah
Maalinta Sabtida ee Masiixiga
Qaabka maamulka ee kaniisadda
Marka labaad ee Masiixa
Aqoonsiga kuwa aaminka ah
Xukunka Ugu Dambeeyey [Xukun weligeed ah]
Warqad shaqaale ka socda J. Tkach
MB 2020 Maarso
MB 2018 Diseembar
MB 2018 Janaayo
MB 2017 Diseembar
MB 2017 Oktoobar
MB 2017 Juun
MB 2017 Abriil
MB 2017 Maarso
MB 2017 Janaayo
MB 2016 Diseembar
MB 2016 Oktoobar
MB 2016 Juun
MB 2016 Abriil
MB 2016 Maarso
MB 2016 Janaayo
MB 2015 Diseembar
MB 2015 Oktoobar
MB 2015 Juun
MB 2015 Abriil
MB 2015 Maarso
MB 2015 Janaayo
WARARKA | ITALIANO | ESPAÑOL | FRANÇAISE
Luqad kale- Jarmalka- Ingiriis- Talyaani- Fransais- Español- Português- Nederlandays- Deenish- Finnishka- Af Iswiidhish- Noorwiijiga- Polish- Bulgaariya- Ruush- Catalan- Basque- Irish- Welsh- Icelandic- Giriig- Gaelic Scottish ah- Turkiga- Isbaanish- Yukreeniyaan- Roomaaniya- Armeniyaan- Azerbaijan- Lithuaniyan- Belarusiyaan- Estoniyan- Joorijiyaan- Hangari- Galiis- Boosniyaan- Makedoniya- Albaaniyaan- Slovak- Czech- Kroatiyaaniyaan- Corsican- Kurdiyiinta (Kurmanji)- Laatiin- Esperanto- Cibraaniga- Faaris- Carabi- Jabaaniyaan- Kuuriyaan- Shiine (Dhaqan ahaan)- Shiine (La Fududeeyey)- Filibiin- Indooniisiyaan- Latvia- Fiyatnaamiis- Malta- Thai- Hindi- Afrikaans- Malays- Sawaaxili- Haitian Creole- Bengaali- Javanese- Khmer- Lao- Maori- Marathi- Mangooliyaan- Nepali- Punjabi- Soomaali- Taamil- Kazakh- Malagasy- Hawaiian- Kyrgyz
Markii nin doonayay inuu ku korsado cunug bulshooyinka qabaa'ilka qadiimka ah, wuxuu ku yiri ereyadan soosocda xaflad fudud: «Aabe waxaan u ahaan doonaa isaguna wuxuu ii noqon doonaa wiilkayga. »Intii lagu guda jiray xafladda guurka, weedho la mid ah ayaa la hadlay:« Iyadu waa afadayda, aniguna waxaan ahay ninkeeda ». Markhaatiyaasha hortiisa, cilaaqaadka ay la leeyihiin midba midka kale ayaa la soo sheegay waxaana ereygan loogaga dhawaaqay in uu ansax yahay.
Sida qoys ahaan
Markii Ilaah doonayay inuu muujiyo cilaaqaadka uu la leeyahay reer binu Israa'iil hore, wuxuu mararka qaarkood adeegsaday ereyo la mid ah: “Aniga waxaan ahay aabbaha reer binu Israa'iil, oo reer Efrayimna waa wiilkayga curadka ah” (Yeremyaah 31,9). Tan darteed wuxuu adeegsaday ereyo sharaxaya xiriirka - sida waalidiinta iyo carruurta. Ilaah sidoo kale wuxuu u adeegsadaa guurka inuu ku sharaxo xiriirka: "Kii kaa dhigay waa ninkaaga ... wuxuu kuugu yeedhay sidii naag oo kale" (Ishacyaah 54,5: 6). Waxaan rabaa in aan adiga kula shaqaysiiyo weligiis ” (Hoosheeca 2,21).
Xiriirka waxaa loo dejiyaa marar badan: "Waa inaad noqotaan dadkayga oo waxaan doonayaa inaan noqdo Ilaahiin." Israa’iil qadiimka ah erayga “dadka” waxaa loola jeedaa inuu jiro xiriir xoogan oo ka dhexeeya. Markuu Rut ku yidhi Nimco: "Dadkaagu waa dadkayga" (Rut 1,16), waxay balanqaaday inay gasho xiriir cusub oo waara. Markii ay sidaas sameyneysay, waxay sharraxday halka ay ka noqon doonto. Xaqiijinta waqtiyada shakiga Markuu Eebbe yidhi, "Waxaad tihiin dadkayga," ayuu ku nuuxnuuxsaday (sida Rut) xiriirka ayaa ka xoog roon xiriirka. «Aniga ayaa ku xidhan, oo waxaad ii tahay sidii qoys oo kale». Ilaah sidan ayuu ugu sheegayaa buugaagta nebiyada marka loo eego dhamaan kutubta hore loo soo dhigay.
Muxuu sidan ugu noqdaa marar badan? Sababtuna waxay ahayd kalsoonida reer binu Israa'iil aawadeed ayaa xiriirka ka dhigtay su'aal. Reer binu Israa'iil way illoobeen axdigii ay la dhigtay Ilaah, waxayna caabudeen ilaahyo kale. Sidaa darteed, Ilaah wuxuu u oggolaaday qabiilooyinkii woqooyi inay ka adkaadaan Ashuur iyo dadka in laga qaado. Inta badan nebiyadii Axdigii Hore ayaa noolaa wax yar kahor qabsashadii qaranka Yahuudah iyo sidii ay ku adoonsadeen dadkii reer Baabuloon.
Dadku way yaabeen. Wax walba miyey dhammaadeen? Ilaahay miyuu ina diiday? Nebiyadii si kalsooni leh ayey ugu celiyeen: Maya, Ilaah nama quusan. Weli annagu dadkiisii ​​baannu nahay welina isagaa Ilaaheenna ah. Nebiyadu waxay saadaalinayeen dib u soo celin qaran: dadku waxay ku noqon doonaan waddankooda, ugu muhiimsanna, waxay ku noqon doonaan Ilaah. Foomka mustaqbalka waxaa badanaa la adeegsadaa: "Waxaad ahaan doontaan dadkayga waxaanan noqon doonaa Ilaahiinna". Ilaah ma uu diidin. wuu soo celin doonaa xiriirka. Isagu wuu samayn doonaa wuuna ka fiicnaan doonaa sidii ay ahaan jirtay.
Farriinta nebi Ishacyaah
Ilaah wuxuu ku soo yidhi Ishacyaah, "Waan barbareeyay oo daryeelay carruurtaydii, oo anigay iga dhex sameeyeen, laakiinse way iga leexdeen. Iyagu Rabbiga bay ka noqdeen, Oo waxay dileen Kan Quduuska ah ee reer binu Israa'iil, wayna diideen. (Ishacyaah 1,2: 4 iyo; Nolosha Cusub). Natiijadu waxay ahayd in dadkii la qabtay. "Taasi waa sababta dadkeygu ay tahay inay uga guuraan sababta oo ah sabab la'aan ' (Ishacyaah 5,13; Nolosha Cusub).
Xiriirku wuxuu u muuqday inuu dhammaaday. Waad diidday dadkaagii reerka Yacquub, "waxaan ka akhrinaynaa Ishacyaah 2,6. Si kastaba ha noqotee, tani waa inaanu weligood dalban: "Ha cabsanina, dadkayga deggan ee Siyoon deggan ... maxaa yeelay waa wakhti yar in yar ka dib ceebnimadayduna way dhammaan doontaa" (10,24-25). Reer binu Israa'iilow, idin illoobi maayo! (44,21). "Waayo, Rabbigu dadkiisii ​​wuu qalbi qaboojiyey, Oo kibixiina wuu u naxay." (49,13).
Nebiyadii waxay ka hadleen dib u soo celin weyn, oo waxay yidhaahdeen, Rabbigu reer Yacquub wuu u naxariisan doonaa, oo haddana reer binu Israa'iil buu dooran doonaa, oo dalkoodiina wuu gelin doonaa. (14,1). Waxaan rabaa in aan woqooyi ku idhaahdo: halkan sii, iyo xagga koonfureed: haka joogsan! Wiilashayda meel fog ka soo kexee, oo gabdhahaygana dhulka darafyadiisa ka soo kexee iyaga » (43,6). Dadkaygu waxay ku noolaan doonaan daaqado nabdoon, guryo nabdoon iyo xasilloonaan (32,18). Oo Sayidka Rabbiga ahu wuxuu tirtiri doonaa oo wejiga oo dhanna wuu ka tirtiri doonaa ... Oo wakhtigaas waxaa la odhan doonaa, Bal eeg, kanu waa Ilaahayagii aannu ku rajo weynaynnay inuu ina caawin doono. (25,8-9). Oo Ilaah wuxuu ku yidhi, Idinku waxaad tihiin dadkayga, (51,16). «Idinku waxaad tihiin dadkayga, wiilashayda aan khaldin) (63,8).
Waxaa jira war wanaagsan, reer binu Israa'iil oo keliya maahee, laakiin wuxuu u dhexeeya dadka oo dhan: «Ajaanib baa ku biiri doona oo waxay ku xidhan doonaan reerka Yacquub» (14,1). "Shisheeyihii u soo jeestay Rabbiga ma odhan doono: Sayidku dadkiisa wuu iga sooci doonaa (56,3). Oo Sayidka Rabbiga ah Zeba'ood wuxuu buurtan ugu samayn doonaa dadyowga buurahan oo dhan. (25,6). Waxay odhan doonaan: kanu waa Rabbiga ... aan ku farxi oo ku rayraynno badbaadintiisa aawadeed (25,9).
Farriinta Nebi Yeremyaah
Yeremyaah wuxuu iskugu daraa sawirrada qoyska: "Waxaan moodayay: Sideen u doonayaa inaan kuu hayo sida inaad tahay wiilkayga oo aan ku siiyo dalka aad jeceshahay ..., waxaan moodayay inaad markaa iigu yeeri doonto" Aabe qaali ah "oo ha iga tegin. Laakiinse Rabbigu wuxuu leeyahay, Reer binu Israa'iil innaba aamin ma ay ahayn, sidii naagta aan aaminka ah u jeclaan caashadeeda. (Yeremyaah 3,19-20). "Maadan xajin axdigaygii haddii aan lahaa sayidkaaga / saygaaga isla markiiba" (31,32). Bilowgii, Yeremyaah wuxuu sii saadaaliyay in cilaaqaadka uu dhammaanayo: 'Iyagu ma aha Rabbiga! Rabbigu wuxuu leeyahay, Reer binu Israa'iil iyo reer Yahuudahba way i quudhsadaan (5,10-11). Waxaan ku ciqaabay reer binu Israa'iil sino darteed oo waan iska daayay oo waxaan siiyey warqad furiin. (3,8). Si kastaba ha noqotee, tani maahan diidmo joogto ah. «Reer Efrayim ma ahan wiilkayga qaaliga ah iyo ilmahayga qaaliga ah? Maxaa yeelay markasta oo aan u hanjabo waa inaan isaga xusuustaa; oo sidaas daraaddeed ayaa qalbigaygu u jabaa si aan isaga ugu roonaado, ayaa Rabbigu leeyahay. (31,20). Gabadh dhaddigow, ilaa goormaad sii xumaanaysaa? (31,22). Wuxuu ballanqaaday inuu soo celin doono: "Waxaan rabaa inaan ka soo qaado hadhaagii adhigayga dalalkii oo dhan, meel kasta oo aan ugu diray" (23,3). Oo Rabbigu wuxuu leeyahay, Wakhtigii waa yimid oo waxay soo noqon doontaa ciqaabtii dadkayga reer binu Israa'iil iyo reer Yahuudah. (30,3). «Eeg, waxaan doonayaa inaan ka keeno dhulka woqooyi waxaanan doonayaa inaan ka soo qaado dhulka darafyadiisa» (31,8). Waxaan rabaa inaan cafiyi xumaantooda waligeyna ma xasuusto dembiyadooda » (31,34). Reer binu Israa'iil iyo reer Yahuudah toona carmal ma noqon doonaan, oo Ilaahooda ah Rabbiga ciidammada ayaa dayrin doona. (51,5). Aad ayey muhiim u tahay in Ilaah iyaga ka beddelo si ay aamin u noqdaan: "Soo noqo, carruurtii dib u noqota, Waan ku bogsiin doonaa caasinimadaada" (3,22). Oo waxaan iyaga siin doonaa qalbi ay igu gartaan, si ay u ogaadaan inaan anigu Rabbiga ahay. (24,7).
Waxaan rabaa in aan sharciga ku dhigo qalbigeeda oo aan wax ku qoro maankeeda » (31,33). "Waxaan rabaa in aan iyaga siiyo dhamaan macno isku mid ah iyo isbadal isku mid ah, waxaanan rabaa in aan cabsi galiyo qalbigeyga in aysan iga tagin" (32,39-40). Ilaah wuxuu ballanqaaday cusboonaysiin cilaaqaadkooda, taasoo la micno ah gabagabada axdiga cusub ee lala yeelanayo: "Waxay ahaan doonaan dadkayga waxaanan doonayaa inaan noqdo Ilaahooda" (24,7; 30,22; 31,33; 32,38). Waxaan rabaa in aan noqdo Ilaaha ka ab ka ab dadka reer binu Israa'iil oo dhan, oo iyagu dadkayga bay ahaan doonaan (31,1). Waxaan rabaa inaan axdi cusub la dhigo reer binu Israa'iil iyo reer Yahuudah » (31,31). Waxaan rabaa inaan axdi weligiis ah adiga kula sameeyo oo aanan rabin inaan wax wanaagsan kuu sameeyo (32,40).
Yeremyaah wuxuu arkay in quruumuhu sidoo kale lahaan doonaan: "Derisyadayda xun oo dhan oo taabta dhaxalkii aan siiyey dadkayga reer binu Israa'iil, bal ogow, anigu dalkooda waan ka rujin doonaa, oo dadka Yahuudahna dhexdoodaan ka kala fogeyn doonaa. ... Oo waxay noqon doontaa markay dadka wax ka bartaan in magacayga lagu dhaarto: Rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye! ... Marka waa inay ku dhex noolaadaan dadkeyga » (12,14-16).
Nebi Yexesqeel wuxuu leeyahay farriin la mid ah
Nebi Yexesqeel wuxuu sidoo kale sharraxayaa xiriirka Ilaah uu la leeyahay reer binu Israa'iil sida guur: «Oo waan ku dhaafay oo wax baan ku fiiriyey, oo bal eeg, waxay ahayd wakhtigii aannu ku toosi lahayn. Oo markaas waxaan gogoshaada kuu sudhay oo cawradaada qaawan. Oo Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, Sidaasaan idinku dhaariyey, oo axdi baan kula dhigtay, inaad adigu iska ahaato, (Yexesqeel 16,8). Tusaalooyin kale, Ilaah wuxuu isu sharraxay sidii adhijir: "Sida adhijir adhigiisa u doondoono idihiisii ​​markii la waayey, waxaan rabaa inaan raadsho idahayga oo aan ka badbaadiyo meel kasta oo ay ku kala firdheen" (34,12-13). Marka loo eego tusaalahan, wuxuu wax ka beddelaa ereyada ku saabsan xiriirka: "Waxaad ahaan doontaan adhigaygii, iyo adhigaygii daaqsintayda, oo waxaan doonayaa inaan Ilaah idiin noqdo" (34,31). Wuxuu sii saadaaliyay in dadku ay ka soo laaban doonaan masaafurinta iyo in Ilaah beddelidoono quluubtooda: «Waxaan rabaa inaan siiyo qalbi kale oo aan siiyo ruux cusub waxaanan rabaa inaan qalbigooda dhagaxa ka qaado jirkooda oo aan siiyo qalbi jireed, sidaa darteed Qaynuunnadayda ku soco, oo amarradaydana dhawr, oo markaas dabadeedna yeela. Iyagu waa dadkayga anna waxaan noqon doonaa Ilaahooda (11,19-20). Xiriirka waxaa sidoo kale lagu sharxay axdi: "Laakiin waxaan rabaa in aan soo xusuusto axdigaygii aan adiga kula dhigtay adiga oo dhallinyaranimadaada ah, oo waxaan doonayaa in aan axdi weligiis ah adiga kula dhiso" (16,60). Isaguna dhexdooduu dhex joogi doonaa, oo waan dhex joogi doonaa, oo Ilaahoodaan ahaan doonaa, oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan. (37,27). Waxaan halkan doonayaa inaan weligiis ku dhex noolaado reer binu Israa'iil. Oo reer binu Israa'iilna waa inaysan mar dambe nijaasayn magacayga quduuska ah (43,7).
Farriinta nebiyadii yaraa
Nebi Hoosheeca wuxuu sidoo kale sharraxayaa jabsiga xiriirka: "Idinku dadkayga ma tihid, sidaas darteed anigu ma doonayo inaan adiga kuu ahaado" (Hoosheeca 1,9). Halkii ereyada caadiga ah ee guurka, wuxuu adeegsadaa ereyada furriinka: "Iyadu ma aha afadaydii, aniguna ma ahi ninkeedii!" (2,4). Sikastaba, sidii horeyba ugu dhacday Ishacyaah iyo Yeremyaah, tani waa buunbuunin. Hoosheeca markiiba wuxuu ku darayaa in cilaaqaadka uusan dhammaanin: "ka dib, ayaa Rabbigu leeyahay, waad iigu yeeri doontaa" ninkayga "... waan kuu joogi doonaa adiga weligaaba" (2,18 & 21). "Waxaan rabaa inaan u naxariisto Lo-Ruhama [aan la jeclayn] oo waxaan rabaa inaan ku idhi Lo-Ammi [Dadkayga ma]:" Waxaad tihiin dadkayga "oo waxay odhan doonaan: Adigu waxaad tahay Ilaahay." (2,25). "Taasi waa sida aan rabo inaan u daaweeyo riddadeeda mar labaad; Waxaan jeclaan lahaa inaan jeclaado iyada; waayo, cadhadaydu way ka sii jeeddaa iyaga » (14,5).
Nebi Yoo'eel wuxuu helay ereyo la mid ah: “Markaa Rabbigu ha u hinaaso dalkiisa, dadkiisana u tudhi doonaa" (Yoo'eel 2,18). «Dadkaygu waa inaanay mar dambe ceeb u noqon» (2,26). Nebi Caamir wuxuu kaloo qoray: "Waxaan rabaa inaan rogo maxaabiistii dadkayga reer binu Israa'iil" (Markay tahay 9,14).
“Isagu wuu noo naxariisan doonaa,” ayuu nebi Miikaah qoray. Oo waxaad aamin u ahaan doontaa reer Yacquub, Oo waxaad Ibraahim u naxariisan doontaa sidii aad awowayaashayo ugu dhaaratay. (Wed 7,19-20). Nebi Sekaryaah wuxuu bixiyaa soo koobid wanaagsan: «Siyoonay, farax oo reyree, magaalada Siyoonay! Waayo, Rabbigu wuxuu leeyahay, Bal eeg, anigu waan imanayaa oo waan kula jiri doonaa, (Sekaryaah 2,14). Bal eeg, anigu dadkaygaan ka soo furan doonaa dalka xagga qorraxdu ka baxdo iyo xagga qorrax ka soo baxa, oo waxaan iyaga u keeni doonaa inay Yeruusaalem degganaadaan. Oo iyagu dadkaygay noqon doonaan, oo anna waxaan noqon doonaa Ilaahooda aaminnimo iyo xaqnimo. (8,7-8).
Buuggii ugu dambeeyay ee Axdiga Hore, nebi Malaki wuxuu ku qoray: "Waxay noqon doonaan hantidayda, ayuu Sayidka Zebaoth yidhi, maalinta aan doonayo inaan sameeyo, oo waan u naxariisan doonaa iyaga sida nin u naxariista wiilkiisa oo daryeela u adeegta » (Waqtiga 3,17).
waxaa qoray Michael Morrison
XULASHADA © 2020 | KHUDBADAHA CARRUURTA Adduunka (SWITZERLAND) | XIDHIIDH | OGEYSIISKA SHARCIYADA | SIYAASADDA ASTURNAANTA | MAIL